နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘယ်လာရုစ် သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘယ်လာရုစ် သံအမတ်ကြီး အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 19, 2018 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအခြေစိုက် ဘယ်လာရုစ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vladimir A. Goshin အား ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ဘယ်လာရုစ် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် စီးပွားရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍများအပါအဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဘယျလာရုဈ သံအမတျကွီး အား လကျခံတှဆေုံ့
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ သညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဗီယကျနမျနိုငျငံအခွစေိုကျ ဘယျလာရုဈ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Vladimir A. Goshin အား ယနနေံ့နကျ ၁၁ နာရီတှငျ နပွေညျတျောရှိ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
ထိုသို့ တှဆေုံ့စဉျ မွနျမာ-ဘယျလာရုဈ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရငျးနှီးမှုနှငျ့ စီးပှားရေး၊ စိုကျပြိုးရေး၊ ယဉျကြေးမှုကဏ်ဍမြားအပါအဝငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။